Dopamine D1 receptor သည် hippocampal ၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုပလတ်စတစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
အသစ်အဆန်းနှင့်အမျိုးမျိုး Dopamine လှုံ့ဆော်
Dopamine D1 အဲဒီ receptor Spatial အသစ်အဆန်း (2008) မှ hippocampal ကိုယ်စားပြုမှု plasticity modulates
J ကို neuroscience ။ 2008 ဒီဇင်ဘာ 10; 28 (50):13390-400. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2680-08.2008.
Tran AH1, Uwano T က, Kimura T က, ဟောရိ E ကို, Katsuki M က, Nishijo H ကို, Ono T က.
လူ့ hippocampus သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အဘို့အရေးကြီးသည်။ ကြွက်များတွင် hippocampal ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို relational ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထုံးစံ၌မီး။ သင်ယူမှုနှင့် hippocampal အာရုံကြော Synaptic plasticity အတွက် glutamatergic စနစ်များ၏အရေးပါမှုကိုပြသထားသည်။ သို့သော်ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင် Spatial လှုံ့ဆော်မှုမှ hippocampal အာရုံကြော plasticity ၏တုန့်ပြန် dopaminergic စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအရေးကြီးသောပြဿနာရှင်းလင်းဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကာဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကွဲပြား Spatial တွေကို၏ခြယ်လှယ်မှုအောကျတှငျ dopamine: D (1) အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက် (D1R-KO) ကြွက်နှင့်၎င်းတို့၏ရိုင်း-type အမျိုးအစား (WT) littermates ထံမှ hippocampal အာရုံခံမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ WT ကြွက်တွေမှာ, နေရာဆဲလ်များ၏အများစုလျင်မြန်စွာကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထုနှစ်ဦးစလုံး enviroments မှာ distal နှင့် Proximity တွေကိုများ၏ထိန်းသိမ်းရေးမှတုန့်ပြန်ကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, D1R-KO ကြွက်တွေမှာ Spatial ပစ်ခတ်ရန်အပေါ် distal တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ D1R-KO ကြွက်များတွင် Proximity တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် facilitated ခဲ့ကာဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အရပျဆဲလ်တွေအများစု Spatial တွေကိုအပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကြွက်တွေမှာ hippocampal အာရုံခံလျှင်မြန်စွာနှင့်ပြင်သာပြောင်းသာတဲ့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင် cipher မှ distal နှင့် Proximity နှစ်ဦးစလုံးတွေကိုအနေဖြင့်အာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဝှက်နိုင်သောဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤသည်စွမ်းရည်ကိုသင်ယူနှင့် D1R အခြေခံကျကျဒီသင်ယူမှု-related အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲနိုငျချို့တဲ့များစွာသောအမျိုးအစားများဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ကျနော်တို့ D1R လိုအပ်နေပြီလို့ Spatial သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အရေးကြီးသောအရာ, ဝတ္ထု enviroments မှာ Spatial သတင်းအချက်အလက်ကုဒ်သွင်းအတွင်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှင့် hippocampal ကိုယ်စားပြု၏ plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းတင်ပြသည်။
လူ့နှင့်အခြားမျောက်ဝံများအတွက် Hippocampal ဖွဲ့စည်းခြင်း (HF) (Episode မှတ်ဉာဏ်အဘို့အရေးကြီးသည်Maguire et al ။ , 1998; Eichenbaum et al ။ , 1999; Rolls, 2005; Rolls နှင့် Xiang, 2005) ။ ကြွက်များတွင် HF ၏တွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေး (Spatial သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေGasbarri et al ။ , 1996; Whishaw et al ။ , 1997; Wilkerson နှင့် Levin, 1999), နှင့်ကြွက်များတွင် hippocampal အာရုံခံ၏အသံသွင်း (သူတို့တစ်တွေတည်နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထုံးစံ၌ပစ်ခတ်ကြောင်းထင်ရှားပါပြီO'Keefe နှင့် Dostrovsky, 1971; Wilson ကနှင့် McNaughton, 1993; O'Keefe နှင့် Burgess, 1996) ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းရေးတွေကိုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် (Muller နှင့် Kubie, 1987; Wiener et al ။ , 1989; Gothard et al ။ , 1996; Hetherington နှင့် Shapiro, 1997; Shapiro et al ။ , 1997; Knierim et al ။ , 1998; Zinyuk et al ။ , 2000; လီဗာ et al ။ , 2002; Leutgeb et al ။ , 2005a,b) သို့မဟုတ် Contextual သတင်းအချက်အလက် (Gill နှင့် Mizumori, 2006), Spatial မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြ (Wilson ကနှင့် McNaughton, 1993; Leutgeb et al ။ , 2005) ။ ကျယ်ပြန့်လုပ်ငန်းဆောင်တာလည်းအကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်ထို့အပြင် HF (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကာသတစ်ဦးအာရုံကြောကိုယ်စားပြုမှုပေးပုံပေါ်Maguire et al ။ , 1998; Eichenbaum et al ။ , 1999) ။ နေရာအရပျ-ဆဲလ်ကိုယ်စားပြုမှု Spatial သင်ယူမှုအချို့ပုံစံများကိုအခြေခံမှထင်နေသည် (McHugh et al ။ , 1996, 2007; cho et al ။ , 1998; Kentros et al ။ , 1998; Eichenbaum et al ။ , 1999; Rotenberg et al ။ , 2000; Dragoi et al ။ , 2003) ။ ထိုသို့ dopamine D ကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်1 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက် (D1R-KO) ကြွက်ကို (နျူကလိယ accumbens အတွက် Spatial သင်ယူမှုနှင့်ပြောင်းလဲ Spatial လှုပ်ရှားမှုချို့ယွင်းခဲ့el-Ghundi et al ။ , 1999, Tran et al ။ , 2005) ။ dopamine hippocampal Synaptic plasticity (modulates ကတည်းကOtmakhova နှင့် Lisman, 1996; Matthies et al ။ , 1997; Swanson-ပန်းခြံ et al ။ , 1999; လီ et al ။ , 2003), က hippocampus အတွက် Spatial ကိုယ်စားပြုများ၏ဝယ်ယူ D1R-KO ကြွက်များတွင်ချို့ယွင်းကြောင်းတွေးဆသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထု enviroments မှာ Spatial cue ထိန်းသိမ်းရေးတုံ့ပြန် D1R-KO နှင့်ရိုင်း-type အမျိုးအစား (WT) ကြွက်များတွင်နေရာအရပ်-ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ဒီအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ဆယ်ပါးအထီး WT ကြွက် (26-33 ဂရမ်) နှင့်7အထီး D1R-KO ကြွက် (24-29 ဂရမ်) ပစ္စုပ္ပန်တွင် neuron မှတ်တမ်းတင်စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဓာတ်ခွဲခန်း (အခြေခံပညာဇီဝဗေဒအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု, သဘာဝသိပ္ပံအမျိုးသား Institutes) မှာပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
မောက် dopamine: D1 အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇ 129'-TCC AAG GTG ACC AAC TTC TTT ပါ GT-884 'နှင့် 5'-CTA ဖြစ်ကြ၏ primer စွမ်းသောတစ်ဦး3BP PCR ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ Hybrid က5/ SV mouse ကို Genomics DNA ကိုစာကြည့်တိုက် (Stratagene) မှခွဲထုတ်ခဲ့သည် TAG CAT CCT AAG AGG GT ကို CGA-3 '' ။ အနုတ်လက္ခဏာရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်အပိုင်းအစဗီဇ (၎င်းကို-A) ကိုတစ်ဦး 1.2 kb MC1 ကမကထ-ဆုံဆို့-တစ်ဦးကအဆိပ်အတောက်တစ် 2.8 kb အောက်ပါ DNA ကိုအပိုင်းအစများသုံးပြီးတပြင်လုံးကိုနိုင်တဲ့ coding sequence ကိုဖျက်ပစ်မှသကဲ့သို့အဆိုပါပစ်မှတ်ထားအားနည်းချက်ကိုဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည် BglI-ဧပြီလမောက် D1R ဗီဇ၏အထက်ပိုင်းဒေသတစ် 2.3 kb PGK promoter-်II ကိုအပိုင်းအစEscherichia coli xanthine-guanine phosphoribosyl transferase ဗီဇ (GPT), တစ်ဦး 1.1 kb MC1 ကမကထ-neomycin ဗီဇ (လက်သစ်), တစ်ဦး 6.5 kb ဧပြီလII-Bamအဆိုပါ 3'-ဘာသာ ပြန်. မရဘဲဒေသနှင့် flanking ဒေသနှင့် plasmid pBluescript (ပါဝင်တဲ့ HI အပိုင်းအစသဖန်းသီး။ 1A) ။ ယဉ်ကျေးမှု E14TG2a IV ES ဆဲလ် (2.5 × 107 ဆဲလ်) ကို transfection ပြီးနောက် G50 ကုသမှုနှင့်အတူရွေးချယ်ရေးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် electroporation 500 μF capacitance, 270 V ကို / 1.8 မီလီမီတာ (ECM600, BTX Electro ဆဲလ်ခြယ်လှယ်), (418 μg / ml) အားဖြင့် linear ပစ်မှတ်ထားအားနည်းချက်ကို၏ 250 μgနှင့်အတူ transfected ခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း 120 ဆေးယဉ်ကိုလိုနီတက်ခူးခဲ့ကြသဖြင့်, Genomics DNA ကို homologous recombination ၏အတည်ပြုချက်ကိုများအတွက်တောင်ပိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းမဲ့ခံခဲ့ရသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အဆိုပါ D1R-KO ကြွက် (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆိုပါ homologous recombinant ES ဆဲလ်ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ယာမာဂူချီ et al ။ , 1996; Koera et al ။ , 1997) ။ အဆိုပါ D1R-KO ကြွက် 57 သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက် C6BL / 6J (B10 / ဂျေ) strain မှ backcrossed နှင့် B6 / J ကိုမျိုးရိုးဗီဇနောက်ခံထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ (primer က) D1TET-1,5'' CAG AAG ACA GGT GGA AAG, CA3'', (primer ခ) mD1Rexon2.seq,5'' TCC ATG GTA gaa GTG TTA GGA GCC: အမျိုးအနွယ်၏အမြီး DNA ကိုလေး primer သုံးပြီး PCR အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်3'', (primer ဂ) neo10,5'' ATC aga GCA GCC gat TGT CTG TTG3'နှင့် (primer ဃ) D1R3'60R, 5' 'GTT GGA gaa GTT CTG TAA CTG TCC 3' '။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း PCR အခွအေနေခဲ့: 94 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်,4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, အဘို့ 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာနောက်ဆုံး extension ကိုမှာ 94 မိမှာ 1 မိမှာ 60 မိ၏ 1 သံသရာခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 72 မိဘို့ 72 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ denaturation,5မိနှင့်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုလှောင်မှု။ အဆိုပါရိုင်း-type နှင့် Mutant alleles (234 နှင့် 460 BP ၏ PCR ထုတ်ကုန်စာအဆက်အသွယ်သဖန်းသီး။ 1B), အသီးသီး။ လူအားလုံးတို့သည်စမ်းသပ်ချက်အခြေခံဇီဝဗေဒအဘို့အ Toyama တက္ကသိုလ်နှင့်အမျိုးသား Institute ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
PowerPoint Slide အဖြစ် Download
အဆိုပါ D1R-KO ကြွက်နှင့် WT နှင့် D1R-KO ကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲတွင် D1R ပရိုတိန်း၏စကားရပ်၏မျိုးဆက်။ Aအဆိုပါ WT allele, အပစ်မှတ်ထားအားနည်းချက်ကိုနှင့်မောက် D1R ဗီဇ၏ Mutant allele ၏, သိထားကိုယ်စားပြုမှု။ အဆိုပါနိုင်တဲ့ coding များနှင့်ဘာသာ ပြန်. မရဘဲဒေသများအသီးသီးတံခါးပိတ်နှင့်ပွင့်လင်းသေတ္တာများအဖြစ်ပြသထားပါသည်။ PCR genotype များအတွက် primer (က, ခ, ဂ, ဃ primers) အသီးသီး, အသေးစားတစ်ခု, ခအားဖြင့်ညွှန်ပြ arrowheads, c နှင့်dအဖြစ်ပြသထားပါသည်။ တစ်ဦးက BamHI site ကိုကွင်းရသောအခါသက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူညွှန်ပြနေသည်။ အဆိုပါဆုံဆို့အဆိပ်အတောက်တစ်ဦးက subunit (၎င်းကို-တစ်ဦး), အီး coli xanthine-guanine phosphoribosyl transferase (GPT) နှင့် neomycin ခံနိုင်ရည် (လက်သစ်) မျိုးဗီဇပွင့်လင်းသေတ္တာများအဖြစ်ပြသထားပါသည်။ B, PCR ရိုင်း-type အမျိုးအစား (D1R + / +) ၏ genotype, heterozygous (D1R +/-), နှင့် homozygous (D1R - / -) Mutant ကြွက်။ အဆိုပါ WT allele နှင့် Mutant (KO) မှ PCR ထုတ်ကုန်အသီးသီး 234 BP နှင့် 460 BP ဖြစ်ကြသည်။ Cတစ် D1R-တိကျတဲ့ antibody ကို အသုံးပြု. အနောက်တိုင်းချေ D1R ပရိုတိန်း D1R ကနေလုံးဝပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှား - / - ကြွက်။
ဦးနှောက် 100 မီလီမီတာ Tris-HCl, သော pH 6.7, 1% SDS, 143 မီလီမီတာ 2-mercaptoethanol နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဆဲလ် (Nacalai Tesque) အတွက် 1% protease inhibitor အရောအနှောင်တစ်ဦးကြားခံအတွက် homogenized ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း lysates (ပရိုတိန်းတစ်ခုစီ 200 μg) (က 10% SDS-polyacrylamide ဂျယ်လ်အပေါ် electrophoresed နှင့်တစ်ဦး Immobilon-P ကိုအမြှေးပါးမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်Millipore) ။ အဆိုပါအမြှေးပါး 10 မိဘို့အခန်းအပူချိန်မှာ 30% အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်နို့ (bd Biosciences) ပါဝင်တဲ့ PBS အတွက်ပိတ်ဆို့နှင့်ဆင့်ကဲ D1R (Sigma, 1: 1000 dilution) ဆန့်ကျင်ကြွက် monoclonal antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခံခဲ့ရသည်ဆန့်ကျင် horseradish peroxidase-conjugation ဆိတ်သငယ်ကို antibody ကိုနှင့်အတူပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ယုန် IgG (1 dilution Sigma, 1000) ဆန့်ကျင် horseradish peroxidase-conjugation ဆိတ်သငယ်ကို antibody ကိုနှင့်အတူပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်:, ဒါမှမဟုတ် actin ဆန့်ကျင်ယုန် antibody ကို (1 dilution Sigma, 1000) နဲ့: IgG (1 dilution Sigma, 1000) ကြွက်။ Immunoreactive ပရိုတိန်းတပ်သားတို့သည် ECL ထောက်လှမ်းကိရိယာအစုံ (GE Healthcare) ၏ protocol ကိုအရသိရသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်း implantation ။
ကြွက်တစ်ဦး 12 ဇအလင်းသံသရာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းသျော (8 မှာပေါ်ထွန်း: 00 AM) ယောက်ရှိခဲ့တယ် ကြော်ငြာ libitum အစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ ကြွက်စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးရှေ့တော်၌ထိုဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို acclimate မှဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့အနည်းဆုံး 1 ရက်သတ္တပတ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်ကုသနေ့ရက်တွင်, ကြွက် (pentobarbital, 40 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) anesthetized ခဲ့ကြသည်နှင့်အ monopolar လှုံ့ဆော်လျှပ် (100 μmအချင်း, သံမဏိ) နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသကိုထညျ့သှငျးအဆိုပါ posterior နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏အဆငျ့မှာ medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးအတွက် intracranial Self-stimulation များအတွက် hypothalamic ဧရိယာ (Franklin နှင့် Paxinos, 1997) (anterior, -2.3 မီလီမီတာ; mediolateral, ± 0.70-0.75 မီလီမီတာနှင့် dorsoventral, -5.3-5.4 မီလီမီတာ) ။ တစ်ဦးကရွှေ့ပြောင်းမှတ်တမ်းတင်စည်းဝေးပွဲကိုလိမ်2μm nichrome ဝါယာကြိုး (ကယ်လီဖိုးနီးယား Fine ကြေးနန်းကုမ္ပဏီ) ၏ 17 tetrodes ပါဝင်သည်ဟု, ဒါမှမဟုတ် 8 ဝါယာကြိုးတစ်ဆော့ဝဲအစုအဝေးတို့သည် hippocampal CA1 ဒေသ၏ dorsal အပိုင်း (သို့ထညျ့ခဲ့သညျFranklin နှင့် Paxinos, 1997အတူတူပင်ခွဲစိတ်မှုကာလအတွင်း) (bregma မှ 1.8 မီလီမီတာ posterior, bregma မှ 1.8 မီလီမီတာ lateral နှင့် ဦး ခေါင်းခွံမျက်နှာပြင်အောက်မှာ 1.4 မီလီမီတာ) ။ ဦး ခေါင်းခွံတွင်တပ်ဆင်ထားသောရတနာဆိုင်တစ်ခုသည်ကြွက်အားလုံးတွင်မြေထုလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရတနာ၏ဝက်အူများနှင့်သွားဘိလပ်မြေကို သုံး၍ microdrive ကို ဦး ခေါင်းခွံတွင်လုံခြုံစွာထားရှိသည်။ impedance ကို ၁၀၀ မှ ၃၀၀ kΩအထိ ၁ kHz ဖြင့်လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြံပေးချက်များကိုခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီတွင်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
စမ်းသပ်ယန္တရားနှင့် Spatial တာဝန်လေ့ကျင့်ရေး။
Spatial တာဝန်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျယန္တရားတစ်ခုမြို့ပတ်ရထားလွင်ပြင် (80 စင်တီမီတာအချင်း, 25 စင်တီမီတာမြင့်သောမြို့ရိုး) ရှိ၏ ဒါကြောင့် (ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်သောလယ်လှည့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း casters နှင့်အတူလှည်းပေါ်မှာကြမ်းပြင်အထက်မြင့်မားသော 80 စင်တီမီတာခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 2A) ။ ပွင့်လင်းလယ်ပြင်အတွင်းပိုင်းအနက်ရောင်ခြယ်သနှင့်အနက်ရောင်ကုလားကာ (အချင်း 180 စင်တီမီတာနှင့် 200 စင်တီမီတာအမြင့်) ကဝိုင်းခဲ့သည်။ အဖုံး၏မျက်နှာကျက်တွင်အ ၀ န်းအနီးတွင်တပ်ဆင်ထားသောအသေးလေးစပီကာလေးခုပါ ၀ င်ပြီး ၉၀ ဒီဂရီခွဲခြား။ စပီကာတစ်ခုချင်းစီ၏အတွင်းဘက်နားတွင်တစ် ဦး ချင်းတပ်ဆင်ထားသောမီးခွက်များ ၄ ခုနှင့်အလယ်ဗဟိုရှိဗီဒီယိုကင်မရာတစ်ခုပါရှိသည်။ များသောအားဖြင့်သုံးနာရီခန့်တွင်မီးသီးတစ်လုံးကိုထွန်းညှိပေးခဲ့ပြီးစပီကာသည်ကိုးနာရီခန့်တွင်အဖြူရောင်ဆူညံသံကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။ မီးထွန်းလိုက်သောမီးသီးများနှင့်ထုတ်လွှတ်သောစပီကာများသည် distal အချက်များဖြစ်သည်။ 90 V သေးငယ်တဲ့မီးသီးလေးကိုမောက်ခေါင်းပေါ်မှာတပ်ထားတယ်။ ဗီဒီယိုကင်မရာ (CinePlex, Plexon) သည်ဗွီဒီယိုပုံရိပ်အချက်ပြကို binary signal အဖြစ်ပြောင်းလဲကာမီးသီး၏အလျားလိုက်ရွေ့လျားမှုကိုခြေရာခံသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းကွန်ပျူတာ (Dell, Precision 4) ကရရှိခဲ့သည် x နှင့် y 33 frames များကို / s mouse ကိုဦးခေါင်း၏အနေအထား၏သြဒီနိတ်။ ကြွက် (အပွင့်လင်းလယ်ပြင်၌တစ်ဦးကိုကျပန်း forage တာဝန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 2B) ။ အဆိုပါ forage တာဝန်အဘို့, program တစ်ခုလွင်ပြင်တဝိုက်နေရမယ့်စတုရန်းအတွင်းကျပန်းမှာရှေးခယျြသောသူတို့၏စင်တာများနှင့်အတူမြို့ပတ်ရထားဒေသများ (ဆုလာဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ) delimited နှင့်မောက်အကျိုးကို site ကိုဝင်ကြ၏အခါဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ် (BSR) ၏ပေးပို့မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ တစ်ဦး5့ကြားကာလပြီးနောက်, ဆုလာဘ်ရာအရပ်ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတည်နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သက်ဝင်ခဲ့သည်
ပုံ2။
စမ်းသပ်ဆဲ setup ကို, Spatial တာဝန်များကိုနှင့်စမ်းသပ်ဆဲထိန်းသိမ်းရေး။ A, စမ်းသပ် setup ကို။ Mouse ပါ ၀ င်သည့်ပွင့်လင်းသောကွက်လပ်တစ်ခုကိုအပေါ်ဆုံးအလယ်ဗဟိုမှကြည့်ရှုသည့် CCD ကင်မရာဖြင့်မောက်၏အနေအထားကိုပြသည်။ distal အချက်များအနေနှင့်အဖြူဆူညံသံထုတ်လွှတ်မှုအတွက် incandescent လျှပ်စစ်မီးသီးများနှင့်စပီကာများကိုမျက်နှာကြက်၏အစွန်အဖျားအနေအထားလေးခု၌တပ်ဆင်ထားသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသည်မောက်စ်၏လမ်းကြောင်းကိုကြံစည်ပြီးလှုံ့ဆော်သူထံမှဆုလာဘ်များပေးပို့ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ B, ကျပန်း forage တာဝန်: တစ်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကျပန်းတစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားဆုလာဘ်ရာအရပျ (သေးငယ်တဲ့အထူအနီရောင်စက်ဝိုင်း) delineated ။ ဒါဟာထို့နောက်မလှုပ်မရှား (သေးငယ်တဲ့ပါးလွှာတဲ့အနီရောင်စက်ဝိုင်း) ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောဆုလာဘ်အရပ်ထဲသို့ဝင်သောအခါအမောက်ခံရတယ်။ START, session ရဲ့အစမှာမောက်၏တည်နေရာ။ အနီရောင်အစက်, ဆုလာဘ်ပေးပို့များ၏တည်နေရာများကို။ C, အကျွမ်းတဝင်ပွင့်လင်းလယ်ပြင်တွင်, Manipulations ။ ပုံမှန်အစည်းအဝေး (အခြေခံ ၁) တွင် ၃ နာရီနာရီတွင်မီးသီးတစ်လုံးဖွင့်ထားပြီးစပီကာသည် ၉ နာရီခန့်တွင်အဖြူရောင်ဆူညံသံကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ distal လည်ပတ် session တစ်ခုမှာတော့ distal တွေကိုများ၏အနေအထားအခန်းထဲကစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်အတူ 1 °လှည့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Proximity လည်ပတ် session တစ်ခုမှာတော့ပွင့်လင်းလယ်ပြင်အခန်းထဲက3°လှည့်ခဲ့သည်, ထို distal တွေကိုမပြောင်းလဲရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Dယင်းဝတ္ထုကိုဖွင့်လယ်ပြင်၌ကိုင်တွယ်။ တစ်ဦးကတစ်စတုရန်းအခန်းထဲက၎င်းမြို့ပတ်ရထားလွင်ပြင်အစားထိုး။ အားလုံးခြယ်လှယ်စမ်းသပ်မှုဟာအကျွမ်းတဝင်ပွင့်လင်းလယ်ပြင်၌အသုံးပြုသောသူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကအချိန်အတိုင်းအတာမှတ်တမ်းတင်အစည်းအဝေးများနှင့် intersession ကြားကာလများအတွက်ကြာချိန်ပြသထားတယ်။
အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပရိသ / ဃ ~20 μmမှာ HF အတွက်ချီတက်ခဲ့သည်။ ကြွက် foraging ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများသမားရိုးကျမှတ်တမ်းတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသော-ဆူးဆဲလ် (ယခင်လေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်Ranck, 1973; Foster နဲ့ Wilson က, 2006) ။ အဆိုပါအချက်ပြ-to-ဆူညံသံအချိုးဟာလျှပ်တစ်ဦးအပေါ် ~4 အဆကိုကျော်လွန်လာသောအခါအချက်အလက်ကောက်ယူမှုစတင်ခဲ့သည်။ signal amplification, filtering ကိုနှင့်မူအရအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီးဆူး waveforms ၏ Digital တစ် Plexon စနစ်အား အသုံးပြု. ပြည့်စုံခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအချက်ပြ Off-line ကိုဆူး sorting အဘို့, 10,000 ကြိမ် amplified 0.6 နှင့်3kHz အကြား filtered တစ် 40 kHz နမူနာမှုနှုန်းမှာဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့နှင့်ကွန်ပျူတာ hard disk ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခု Off-line ကို sorter အစီအစဉ် (OfflineSorter, Plexon) ကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ waveform အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်တစ်ခုတည်းယူနစ်သို့အထီးကျန်ခဲ့ကြသည်။ အထီးကျန်ယူနစ် superimposed လှိုင်းပုံစံများကိုမှတ်တမ်းတင်အစည်းအဝေးများတစ်လျှောက်လုံးလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုစစ်ဆေးရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစပျစ်သီးပြွတ်ထို့နောက်စပျစ်သီးပြွတ်နယ်နိမိတ်ကောင်းစွာကွဲကွာခဲ့ကြကြောင်းသေချာစေရန်ကိုယ်တိုင် check လုပ်ထားကြောင်းကို waveform ပုံစံမျိုးစုံအရေးယူအလားအလာနှင့်အတူတသမတ်တည်းခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီသီးခြားစပျစ်သီးပြွတ်များအတွက်တစ်ဦး interspike ကြားကာလ Histogram ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်အနည်းဆုံး 1.0 ms တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာဆန့်ကျင်ဘက်ကာလသံသယမျိုးစုံယူနစ်ထုတ်ပယ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး tetrode မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပမာမှာပြသ ပုံ 3.
ပုံ3။
တစ်ဦး Off-line ကို sorter အားဖြင့်အထီးကျန်တဲ့ tetrode နှင့်အတူမျိုးစုံ-ယူနစ်မှတ်တမ်းတင်တခုရဲ့ဥပမာ။ Aအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြွတ်သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦး tetrode ထံမှ4အာရုံခံ (က, ခ, ဂ, ဃ) တစ်ဦးချင်းစီလျှပ်ကူးပစ္စည်း (E1-E4) ကမှတ်တမ်းတင်ထားသော၏, superimposed waveforms B. B, Cluster ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆိုပါ x- နှင့် y-axes အသီးသီးလေးပါး tetrode လျှပ်၏လျှပ်ကူးပစ္စည်း2နှင့် 1 အတွက်အချက်ပြမှုများ၏အထွတ်အထိပ်တန်ဖိုးများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအစက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောတံခါးခုံကိုကျော်လွန်တအာရုံခံဆူးကိုယ်စားပြုတယ်။ လေးယောက်ဝိုင်းရံပြွတ် (က, ခ, ဂ, ဃ) ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဗဟိုနှင့်လက်ဝဲဘက်နှင့်ညာဘက်ထောင့်မှာလူစုခွဲအဖြူရောင်ပြွတ်အသီးသီးအခြေခံဆူညံသံများနှင့်ဆွအချက်ပြမှုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စံကိုက်ညှိ: 0.8 ms, 0.5 MV ။
အဆိုပါမြို့ပတ်ရထားလွင်ပြင် (အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်) တွင်ခြယ်လှယ်။
နေရာအရပ်-ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုကျပန်း BSR ထွက်ရှာကြရာကြွက်စဉ်အတွင်းအများအပြား 10 မိအစည်းအဝေးများကျော်တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထား Cylinder ပုံစံခန်း၌စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အာရုံခံအစည်းအဝေးများနှင့် (distal) extramaze ၏ပမာဏနှင့် intramaze (Proximity) ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအရပ်ဌာနလယ်ကွင်းများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန် sequential အစည်းအဝေးများတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ ပုံ 2C sequential အစည်းအဝေးများစမ်းသပ်၏ပုံပြသထားတယ်။ စံ session (prerotation, အခြေခံ 1) တွင်, ကြွက်တွေဟာ9နာရီမှာအဖြူဆူညံသံထုတ်လွှတ်နေတဲ့စပီကာနှင့်အတူမြို့ပတ်ရထားပွင့်လင်းလယ်ပြင်၌ foraged နေစဉ်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်3o 'မှာလောင်ကျွမ်းခြင်းလျှပ်စစ်မီးသီး' ' နာရီအနေအထား။ ထို့နောက် Neuron များကို distal cue rotation နှင့် proximal cue rotation session များ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အဆိုပါ distal cue လည်ပတ် session တစ်ခုမှာတော့အခန်းထဲကစဉ်ဆက်မပြတ်ထားရှိမည်နေစဉ်, distal တွေကိုများ၏အနေအထား, 180 °လှည့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Proximity cue လည်ပတ်ခုနှစ်, distal တွေကိုမပြောင်းလဲကျန်ရစ်နေစဉ်အခန်း 180 °လှည့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ distal သို့မဟုတ် Proximity session များ၏တစ်ခုချင်းစီကိုခြယ်လှယ်ပြီးနောက်, တစ် ဦး အပိုဆောင်း session တစ်ခုစံအခြေအနေများမှပြန်လာသောခံရသည့် distal နှင့် Proximity တွေကိုအတူမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ session မျိုးစုံကိုတဆက်တည်းမှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့နောက် mouse ကို session များကြားရှိ cable cable မှအဆက်ပြတ်မထားဘူး။ တိရိစ္ဆာန်များ၏ Spatial တိမ်းညွတ်မှုကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတစ်ခုစီမတိုင်မှီနှင့်အပြီးတွင် mouse သည်အသံချဲ့စက်၏အပြင်ဘက်တွင်အနည်ထိုင်။ ၅ မိနစ်အနားယူသည်။
နှစ်ထပ်ကိန်းလွင်ပြင် (ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်) တွင်ခြယ်လှယ်။
နေရာအရပ်ဆဲလ်ထို့နောက် mouse ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့ခဲ့အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်သောလယ်၌မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အသစ်ဖွင့်လှစ်လယ်အကျွမ်းတဝင်လွင်ပြင်ကိုအစားထိုးမယ့်စတုရန်းအခန်းထဲက (အရွယ် 55 × 55 စင်တီမီတာ, 25 စင်တီမီတာအမြင့်) ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကတူညီစတုရန်းအခန်းများတနည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အသစ်ကပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိန်းသိမ်းရေးများ၏ပာပါ (အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အသုံးပြုသူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 2D) ။ တစ်ခုခုအတွက်အကျွမ်းတဝင်သို့မဟုတ်အသစ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီ session ကိုမပြုမီ, ကြမ်းပြင်တစ် 0.5% Hibitan ဖြေရှင်းချက် (ဆူမီတိုမိုကုမ္ပဏီ) နဲ့သန့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်။
လယ်ပြင် delineation ချထားပါ။
တစ်ခုလုံးကို session များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ pixel အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ၌ကျိန်းဝပ်အချိန်အားဖြင့် spikes ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကခွဲဝေတစ်ဦးပစ်ခတ်မှုနှုန်းမြေပုံလြှော့။ အဆိုပါ pixel ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်း၏ဖြန့်ဖြူးမြေပုံ 2.4 × 2.4 စင်တီမီတာတစ် pixel အရွယ်အစားနဲ့အရောင်စကေးကကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ မောက်လွင်ပြင်၌သွားရောက်ခဲ့ဘူးသော pixels မီးခိုးရောင်မှာပြနေကြသည်နှင့်မောက်လည်ပတ်ခဲ့ပေမယ့်ဆဲလ်ပစ်ခတ်ဘယ်တော့မှဘယ်မှာသူတွေကိုအဖြူ pixels ကိုအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သုညထက်ကြီးမြတ်တစ်ဦးကပစ်ခတ်မှုနှုန်းအရောင်အကြေးခွံစိမ်းပြာရောင်, အပြာ, အစိမ်း, အဝါ, အနီဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုစကေးအပေါ် rated ခဲ့သည်။ နှစ်ကြိမ်ယုတ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှင့်အတူ pixels အနီရောင် pixels ကိုအဖြစ်ပြသထားပါသည်။ နေရာအရပ်လယ်ကွင်းနှစ်ကြိမ်နှုန်းပစ်ခတ်အဆိုပါအစည်းအဝေးများ၏ပျမ်းမျှကျော်လွန်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှင့်အတူ pixels ကိုပြွတ်အဖြစ် delineated ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကအရပျကိုလယ်သတ်မှတ်ထားတွေ့ဆုံနှစ်ခု pixels ကိုအားဖြင့်မျှဝေမဆိုအစွန်းမှတဆင့်သော်လည်းမထောင့်ကတဆင့်ဆက်လက်နိုငျသညျ။ တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအိမ်နီးချင်း pixels ကိုသတ်မှတ်ထားကျေနပ်လျှင်, လယ် pixels ကိုထည့်သွင်းရန်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကဆက်ပြောသည် pixel ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်ဦးကိုအိမ်နီးချင်း pixel ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကအိမ်နီးချင်း pixels ကိုသတ်မှတ်ထားကျေနပ်သောအခါ, field ရဲ့ကန့်သတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ နေရာတစ်နေရာ-related ဆဲလ်၏နိမ့်ဆုံးလယ်ကွင်းအရွယ်အစား9pixels ကိုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သိသိသာသာင်ကပ်လျက် pixels ကို၏ Noncontiguous ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသူတို့နေရာအရပ်လယ်အထက်ပါစံကျေနပ်လျှင်နှုန်းသည် "subfields" အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ပစ်ခတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
စံ session ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
တစ်ဦးချင်းစီအရပျကို-related အာရုံခံဆဲလျအဘို့, စံ session တစ်ခုအတွင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်းကြံစည်မှု (1) အရပျကိုလယ်အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်; (2) ကိုဆိုလိုခြုံငုံပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်း; (3) ကိုဆိုလို infield ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်း; (4) နှုန်းကိုပစ်ခတ်ယုတ် outfield; (5) ကိုအများဆုံး infield ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်း; (6) sparsity; (7) Spatial tuning; (8) Spatial ကွက်တိဝင်; နှင့် (9) သည် Spatial သတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအရာများ (bits သည် / ဆူး) ။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယခင်ကဖော်ပြထားမှုနည်းလမ်းများ (သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြWiener et al ။ , 1989; Skaggs et al ။ , 1993; Jung et al ။ , 1994; Hetherington နှင့် Shapiro, 1997; Shapiro et al ။ , 1997) ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏တန်ဖိုးများကိုကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အသုံးပြု၍ ကြွက်အုပ်စုနှစ်ခုအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် t စမ်းသပ်။ အတိုချုပ်, အရပျ field ရဲ့အရွယ်အစားသွားရောက်ခဲ့ပြီးနယ်ပယ်တွင်ကျော်ရာအရပ်ကို field ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ spikes ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက် session ကိုအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတဲ့ session တစ်ခုအတွင်းပစ်ခတ်အဖြစ်ယုတ်ခြုံငုံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းကိုတွက်ချက်ခဲ့သည်။ ယုတ် infield နှင့် outfield ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများဆိုလိုရာအရပ်လယ်ကွင်းအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိဆဲလ်များ၏ပျမ်းမျှပစ်ခတ်မှုနှုန်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ အများဆုံး infield ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းအရပျကိုလယ်ပြင်နှင့်အတူအပေါငျးတို့သ pixels ကို၏အမြင့်ဆုံးပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းခဲ့သည်။ ဆဲလ်များ၏ Spatial tuning (နှုန်းကိုပစ်ခတ်ယုတ် outfield ဖို့ရာအရပျတောအမှုနှုန်းပစ်ခတ်ယုတ်၏အချိုးအစားအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်Wiener et al ။ , 1989) ။ အဆိုပါ Spatial ကွက်တိဝင်တစ်ဦး pixel အတွက်နှုန်းနှင့်ကပ်လျက် pixels ကိုအတွက်ယုတ်မှုနှုန်းအကြားဆက်စပ်မှုမှ z-transform ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်အားဖြင့်အချက်ပြအဆိုပါ Spatial သတင်းအချက်အလက် (အပေါ်က) ​​(Skaggs et al ။ , 1993) အောက်ပါညီမျှခြင်းများကတွက်ချက်ခဲ့သည်: ဘယ်မှာ R အဲဒီ session ပျမ်းမျှအားပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်, ri pixel အတွက်နှုန်းဖြစ်ပါသည် iနှင့် Pi မောက် pixel အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည် i.
Distal လည်ပတ်, Proximity လည်ပတ်နှင့် remapping ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။
ကွဲပြားခြားနားသောအစည်းအဝေးများအကြားနေရာလိုင်းများ၏လည်ပတ်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးခြယ်လှယ်ခြင်း (distal သို့မဟုတ် proximal cues) ဖြင့်အလှည့်ကျတွက်ချက်ရန်နေရာတစ်ခု၏ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းတာသည်။ ဘင်တစ်ခုချင်းစီ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုပျှမ်းမျှသူ့ဟာသူနှင့်ကပ်လျက်အမှိုက်ပုံးများအဖြစ်ပြန်လည်တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ထိုပုံးများကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဆဲလ်တစ်ခုစီအတွက် (၁) မူရင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းခင်းကျင်းမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာခြယ်လှယ်မှုများနှင့်အတူဒုတိယအစည်းအရုံးအတွင်းရှိ Pearson ထုတ်ကုန် - အခိုက်ဆက်စပ်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ ထို့နောက် (၂) ပစ်ခတ်မှုနှုန်းမြေပုံ၏ထောင့်အလှည့်ပမာဏ အစည်းအဝေးများ၏တရံအကြား quantified ။ ဤသည်အဆုံးစွန်တန်ဖိုးကိုလှည့်ပစ်ခတ်ရန်ပစ်ခတ်မှုမြေပုံအမြင့်ဆုံးမူရင်း session ရဲ့ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုမြေပုံနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းမှာအနေအထားကိုဆုံးဖြတ်ရန် 1 °လည်ပတ်တိုးမြှင့်အတွက်ဒုတိယ session ရဲ့ပစ်ခတ်မှုနှုန်းမြေပုံလှည့်ခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအလှည့်ထောင့်သည်နေရာနှစ်ခုလုံးအကြားလှည့်ပတ်သွားသောပမာဏအဖြစ်ယူဆောင်သွားသည်။ အကယ်၍ ၎င်း၏နေရာနယ်ပယ်များပြောင်းသွားပါက ၅၀% သည်ပေးထားသော cue လည်ပတ်မှုအတွက်လှည့်ပါကဆဲလ်များသည်အချက်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့အခြေခံ session ကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ session ကို။ အခန်း ၂ ခုတွင်သေနတ်ပစ်လယ်ကွင်းများ၏ပြန်လည်မတူကွဲပြားမှုများ (ပြန်လည် remapping) အတွက်အစီအမံများကိုလည်းတွက်ချက်ခဲ့သည်။ အောက်ပါအခြေအနေများအနက်မှတစ်ခုကိုဆဲလ်တစ်ခုသည်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်စဉ်းစားသည်။ (၁) ဆဲလ်သည်ဝတ္ထုခန်းမနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ပစ်ခတ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းသည်၊ (၂) ဆဲလ်သည်အကျွမ်းတဝင်အခန်းထဲရှိထက်ဝတ္ထုအခန်းထဲတွင် ပို၍ အားကောင်းလာသည်သို့မဟုတ် (2) လယ်ပြင်အကျွမ်းတဝင်အခန်းထဲကအတွက်ယခင်တည်နေရာနှင့်အတူအနေအထားနှင့် ဦး တည်ရာထပ်မတည်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကပြုပြင်ထားသောအမြင်အာရုံချောက်ထဲစမ်းသပ်မှု (Fox က, 1965; Crawley, 2000) ကြှနျုပျတို့၏ကြွက်များ၏တွေလိုပဲအမြင်စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလှည့်အတွက်ဒေါင်လိုက်တစ်စက်၏ nadir မှာအနိမ့်အလျားလိုက်လေယာဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒေါင်လိုက်တစ်စက် (46 စင်တီမီတာ), ချိတ်ဆက်ထားပြီးတစ်ဦးအလျားလိုက်လေယာဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးကသစ်သားသေတ္တာ (46 စင်တီမီတာ× 48 စင်တီမီတာ) ။ တစ်ဦးကအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကျားကွက်-patterned စက္ကူအလျားလိုက်လေယာဉ်နှင့်ဒေါင်လိုက်တစ်စက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ပွင့်လင်း Plexiglas ၏တစ်ဦးကစာရွက်အဆိုပါချောက်ထဲဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အလူမီနီ၏တစ်ဦးခေါင် (2.54 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် 3.8 စင်တီမီတာအထူ) ကိုချောက်ထဲရဲ့အစွန်းမှာနေရာချပေးခဲ့သည်။ ယင်းယန္တရား၏နှစ်ဖက်စလုံးကအလွန်အမင်း illuminated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပါးသိုင်းမွေးထိတွေ့နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ပပျောက်ဖို့အမြင်အာရုံချောက်ထဲစမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ D10R-KO နှင့် WT ကြွက်တွေကနေ 1 အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား၏အသီးအသီးနှင့်အတူအုပ်စုနှစ်စုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ မောက် (10 စမ်းသပ်မှုတွေပြီးနောက်ယန္တရားကိုပိုမိုစမ်းသပ်မှုတွေကောက်ယူခဲ့ကြသည်5°နှင့် 180 လှည့်ခဲ့ပါတယ်)5ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အစမှာဗဟိုခေါင်အပေါ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ မောက်အလျားလိုက်ကွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ဆင်းဖို့ရွေးချယ်သောအခါချောက်ထဲတစ်စက်ခြမ်းပေါ်သို့ချနင်း mouse ကိုတစ်ဦး "အနှုတ်လက္ခဏာ" တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မှတ်နေစဉ်ကတစ်ဦး "အပြုသဘောဆောင်သော" တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဗဟိုခေါင်ကနေဆင်းပေးဖို့ mouse ကိုအဘို့သိမ်းယူအချိန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအောင်းနေချိန်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
မှတ်တမ်းတင်လျှပ်အဆိုပါ hippocampal CA1 ၏ပိရမစ်ဆဲလ်အလွှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော advanced ခံရဖို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်, မှတ်တမ်းတင်လျှပ်များ၏တည်နေရာများကို histologically မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း pentobarbital ဆိုဒီယမ် (40 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုကလျှပ်တွေ့ရှိရပါသည် (30 s အတွက် 15 μAအနုတ်လက္ခဏာလက်ရှိ) ကမှတ်တမ်းတင်လျှပ်မှတဆင့်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ မောက်တရားဝင်-ဆား buffered 0.9% အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 10% ဆားနှင့်အတူ perfused ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တစ်ပါတ်မှုအတွက် 30% တရားဝင်-ဆားထဲမှာဖယ်ရှားခြင်းနှင့် fixed ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တစ်ခဲ microtome အပေါ် (50 μm) coroner sectioned နှင့် cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြသည်။
မြေတပြင်လုံးနိုင်တဲ့ coding sequence ကိုဖျက်ပစ်မှသကဲ့သို့ homologous recombination အားဖြင့်မောက်စ် ES ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ D1R ဗီဇနှောင့်အယှက်ပေးရန်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားအားနည်းချက်ကိုဆောက်လုပ်ထား (သဖန်းသီး။ 1A) ။ 1 G120 ယဉ်ထဲကနှောင့်အယှက် D418R ဗီဇနှင့်အတူလေး Clone ကိုလိုနီ (Data ပြမဟုတ်) တောင်ပိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားအားနည်းချက်ကိုနှင့်အတူ E14TG2a IV ES ဆဲလ် transfection ဖြင့်ရရှိသောနှင့်, Clone မှဆင်းသက်လာ Chimera အဆိုပါ germline မှတဆင့် mutation မှတဆင့်ကူးစက်သောခဲ့ကြသည်။ Heterozygous သားမွေး homozygous Mutant ကြွက်ထုတ်လုပ်ဖို့ intercrossed ခဲ့ကြသည်။ ပုံ 1B heterozygous အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှသားမွေး၏ genotype များအတွက် PCR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြသထားတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ mouse ကိုဦးနှောက်၏စုစုပေါင်း lysates အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ WT ကြွက်တွေအတွက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ D1R ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကို (D1R-KO ကြွက်တွေမှာလုံးဝပျက်ကွက်ခဲ့သဖန်းသီး။ 1C) ။ ဆနျ့ကငျြ, β-actin ပုံမှန်အားဖြင့် (နှစ်ဦးစလုံး D1R-KO နှင့် WT ကြွက်များ၏ striatum အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1C).
မှတ်တမ်းတင်လျှပ်၏ရာထူးဏုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောတစ်သျှူးအပိုင်းပေါ်သို့တစ်ခုသို့ဆက်စပ်လျက်, အပိုင်း mouse ကိုဦးနှောက် Atlas နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြ၏ Franklin နှင့် Paxinos (1997)။ လူအားလုံးတို့သည်မှတ်တမ်းတင်က်ဘ်ဆိုက်များ (ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများများအတွက် CA1 ဒေသတွင်း၌တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 4).
ပုံ4။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားမှုကို၏ verification ။ WT ကြွက်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြံပေးချက်များ (အနက်ရောင်ဖြည့်စက်ဝိုင်း) ၏တည်နေရာ (A) နှင့် D1R-KO ကြွက် (B) ကိုယူနစ်မှတ်တမ်းတင်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပန်းကန်ထဲကနေသူများနှင့်ဆင်တူရန်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြသည် Franklin နှင့် Paxinos (1997)။ တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအနားမှာနံပါတ်များကို bregma ထံမှမီလီမီတာကိုက်ညီတဲ့။
တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် D1R-KO နှင့် WT ကြွက်တွေမှာ Hippocampal ဆဲလ်
ကျနော်တို့ D1R-KO နှင့်၎င်းတို့၏ WT littermates အတွက် CA1 ဒေသကနေအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ တရာရှစ်ဆယ်သုံးဆဲလ် D82R-KO ကြွက်တွေကနေ WT ကြွက်နှင့် 1 ဆဲလ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အားဖြင့် (အရပ်ဌာန-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပြသ D99R-KO ကြွက်မှ၎င်း, 77; သူတို့အားဆဲလ်၏, WT ကြွက်တွေကနေ 99 (တစ်ခုတည်းလျှပ်အသုံးပြုပုံ 77.8 / 22, 99% tetrodes, 22.2 / 52, 1% အားဖြင့်) အရပ်ဌာန-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပြသ tetrodes, 42 / 52, 80.8%; တစ်ခုတည်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း, 10 / 52, 19.2%) ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ KO, 99 / 183, 54.1%, vs ကြွက်များ၏အုပ်စုနှစ်စုအကြားအရပ်ဌာန-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပြသမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကို (WT, 52 / 82, 63.4% မျှခြားနားချက်ရှိခဲ့သည် p = 0.156, χ2 စမ်းသပ်မှု) ။ ထို့ကြောင့် D1R ၏ခေါထွက်ရာအရပ်ကိုဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျော့မပေးပါဘူး။ နေရာအရပ်ဆဲလ်များအတွက်ကျနော်တို့ကို (အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စံ session တစ်ခုအတွက်အခြေခံပစ်ခတ်ရန်ဂုဏ်သတ္တိများသွင်ပြင်လက္ခဏာစားပွဲတင် 1) ။ ကြွက်များ၏အုပ်စုနှစ်စုအကြားမည်သည့် Spatial ပစ်ခတ်ရန် parameters တွေကိုမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးနှိုင်းယှဉ်အတွက် (ရှိခဲ့သည်, p > 0.05), D1R ၏မရှိခြင်းတည်ငြိမ်ပြီးကောင်းစွာစူးစမ်းပတ်ဝန်းကျင်၌အရပျဆဲလ်များ၏အခြေခံပစ်ခတ်မှုဂုဏ်သတ္တိများအလျှော့ပေးလိုက်လျောဘူးကြောင်းအကြံပြု
ဒီ window ထဲမှာ
တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် WT နှင့် D1R-KO ကြွက်တွေမှာဂုဏ်သတ္တိများပစ်ခတ် hippocampal ရာအရပျ-ဆဲလ်နှိုင်းယှဉ်
D1R-KO တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် distal တွေကိုတုံ့ပြန်ရာအရပျဆဲလ်တွေလျော့နည်းစေ
ကျနော်တို့အကျိုးဆက်ကတော့အကျွမ်းတဝင်မြို့ပတ်ရထားမှတ်တမ်းတင်အခန်း distal နှင့် Proximity တွေကိုလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအောက်မှာ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်များ၏အာရုံကြော plasticity ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုများ၏ထိန်းသိမ်းရေးမှရာအရပျဆဲလ်များ၏တုံ့ပြန်မှု distal တွေကို, Proximity တွေကို, နှစ်ဦးစလုံး cue အမျိုးအစားများနှင့်မ cue အမျိုးအစား (ကထိန်းချုပ်ထားခံအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်စားပွဲတင် 2) ။ WT ကြွက်တွေမှာ distal တွေကိုများ၏သက်ရောက်မှုများ Proximity တွေကို (ကျော် predominatedစားပွဲတင် 2), သောအရပျကိုဆဲလ် (52 / 91, 57.1%) ၏အများစုပါ (distal တွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်သဖန်းသီး။ 5A, 1-5), နည်းပါးလာရာအရပျဆဲလ် (15 / 91, 16.5%) ကို (Proximity တွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်သဖန်းသီး။ 5B, 1-5) နှင့်တစ်ဦးပဉ်စမ (18 / 91, 19.8%) (distal နှင့် Proximity နှစ်ဦးစလုံးတွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်သဖန်းသီး။ 5C, 1-5) ။ သိသိသာသာ, D1R-KO ကြွက်တွေမှာ (စားပွဲတင် 2), နေရာမရှိဆဲလ်တွေ (0 / 50, 0%) ကို distal တွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့်မှတ်တမ်းတင်ရာအရပျဆဲလ် (40 / 50, 80%) အများစုပါ (Proximity တွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်သဖန်းသီး။ 6A,B, 1-5) ။ D1R-KO ကြွက်တွေမှာ (ထို distal + Proximity + နှစ်ဦးစလုံးတွေကိုအောက်ပါ) cue လည်ပတ်ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့အာရုံခံအရေအတွက်, WT, 40 / 50, 80% vs 85% WT ကြွက် (KO, 91 / 93.4 အတွက်ထက်နည်းပါးလာခဲ့တယ် , p <0.05) ။ ဤရလဒ်များအရ D1R-KO ကြွက်များတွင် proximity များကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲစေသောအာရုံခံဆဲလ်အရေအတွက်တိုးများလာသော်လည်း WT ကြွက်များတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊
အကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထုနှစ်ဦးစလုံး enviroments မှာ distal နှင့် Proximity တွေကိုပြောင်းလဲမှုများသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီး WT နှင့် D1R-KO ကြွက်တွေမှာ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို
ပုံ5။
အဆိုပါ (1-5) အကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာ (6-10) တွင် WT ကြွက်များတွင် hippocampal ရာအရပျ-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် distal နှင့် Proximity တွေကိုအကြား Spatial ဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲများ၏ဆိုးကျိုးများ။ A, အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်၌, နေရာတစ်နေရာဆဲလ်စံ session တစ်ခုအတွက်9နာရီ (1) ပတ်ပတ်လည်မှာနေရာတစ်နေရာပစ်ခတ်ရန်လယ်ရှိခဲ့ပါတယ်, နှင့်၎င်း၏နေရာလယ်ကွင်း distal လည်ပတ် session တစ်ခုအတွက်3နာရီအနေအထား (2) သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် , အခြေခံ3session အတွက်စံ session တစ်ခုအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောအနေအထား (2) သို့ပြန်သွား, အ Proximity လည်ပတ် session တစ်ခုအတွက်အဘယ်သူမျှမပြောင်းကုန်ပြီ (4) နှင့်မှတ်တမ်းတင်အခန်းထဲကပြန်လာသောခဲ့သည့်ပြန်လာ session တစ်ခုအတွက်အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု (5) သို့ပြန်သွားသည် ပုံမှန်အနေအထား။ ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင်, ဒီဆဲလ်၏တည်နေရာ - တိကျတဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုလည်း distal တွေကိုနောက်တော်သို့လိုက် (6-7), ဒါပေမယ့်မ Proximity တွေကို (8-9) နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ B, တစ်ဦးကနေရာအရပ်ဆဲလ်ဟာ distal တွေကို (1-2) ၏အလှည့်ကိုလိုက်နာပေမယ့်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Proximity တွေကို (3-4) နောက်တော်သို့လိုက်မယ့်နေရာအရပ်လယ်ပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေရာမှလယ်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မှဆန့်ကျင်ဘက်ထင်ရှားပေမယ့်နေဆဲ Proximity တွေကို (8-9) ၏အလှည့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်အခါဤအကလာပ်စည်း၏အရပျကိုလယ်တ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင် remapped ခဲ့သည်။ C, တစ်ဦးကနေရာအရပ်ဆဲလ်ဟာအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် distal တွေကို (1-2) နှင့် Proximity တွေကို (3-4) နှစ်ဦးစလုံး၏ပြောင်းလဲမှုကိုနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းရာအရပျကိုလယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ဒီဆဲလ်၏အရပျလယ်ကွင်းကိုသာ distal တွေကို (5-6), မ Proximity တွေကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အဆိုပါပစ်ခတ်မြေပုံဘေးမှာအလင်းမီးသီးများနှင့်စပီကာများရုပ်ပုံများအဆိုပါ distal နှင့် Proximity တွေကိုများ၏ခြယ်လှယ်အခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့၏အစီအစဉ်များဖော်ပြသည်။ အဆိုပါလည်ပတ်မြှားဟာ Proximity cue လည်ပတ် session တစ်ခုအတွက်အသံသွင်းအခန်းထဲသို့၏လည်ပတ်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါပစ်ခတ်မြေပုံ၏ညာဘက်မှအရောင်စကေးစားပွဲပုပစ်ခတ်ရန်နှုန်းသည်များအတွက်စံကိုက်ညှိညွှန်ပြ။ ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းမြေပုံ၏ညာဘက်ကွင်း၌အဆိုပါနံပါတ်များကိုအသီးသီးနှုန်းထားများပစ်ခတ်နေ infield နှင့် outfield ဖော်ပြသည်။ အစိမ်းရောင်ပွင့်လင်းရင်ပြင်ဆဲလ်၏အရပျကိုလယ်လှည့်ခဲ့သောအတွက်အစည်းအဝေးများအလေးပေးပြောကြားဖို့ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းကိုမြေပုံများအားခိုင်ခံ့။
ပုံ6။
အဆိုပါအကျွမ်းတဝင် (1â€အတွက် D1R-KO ကြွက်များတွင် hippocampal ရာအရပျ-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် distal နှင့် Proximity တွေကိုအကြား Spatial ဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲများ "5) နှင့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာ (6â€" 10) ၏ဆိုးကျိုးများ။ A, တစ်ဦးကပုံမှန်နေရာအရပ်ဆဲလ်ဟာ distal တွေကို (1â€၏လည်ပတ်အတိုင်းလိုက်နာ "2), ဒါပေမယ့် Proximity တွေကို (3â€၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်" ဟုအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် 4) မရာအရပျကိုလယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ဒီဆဲလ်၏အရပျလယ် distal ဒါမှမဟုတ် Proximity cue ထိန်းသိမ်းရေးဖြစ်စေဖြင့်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရပါဘူး။ Bအဘယ်သူ၏နေရာအရပ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုဟာ distal တွေကို (1â€၏လည်ပတ်နောက်သို့မလိုက်ခဲ့ဘူး "2) ပေမယ့် Proximity တွေကို (3â€၏လည်ပတ်အတိုင်းလိုက်နာခဲ့ကြ" ဟုအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် 4), ဤဆဲလ်တဲ့နေရာကလာပ်စည်း၏, နောက်ထပ်ဥပမာ ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင် (6â€ "10) တွင်အလားတူတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ D1R-KO ကြွက်တွေအတွက်နေရာမရှိဆဲလ် distal တွေကိုအတွင်းပြောင်းလဲမှုနောက်တော်သို့လိုက်သတိပြုပါ။ အခွားသောဖော်ပြချက်များအတွက်သူများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ ပုံ 2.
ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင် D1R-KO ကြွက်ရာဆဲလ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတုံ့ပြန်မှု
ကျနော်တို့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု processing အတွက် hippocampal ရာအရပျဆဲလ်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် elucidate ငှါ၎င်း, D1R စနစ်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ထပ်မံစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းတွင်ဝတ္ထုစတုရန်းအခန်းထဲကထိတွေ့တဲ့အခါမှာ 86 ဆဲလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်ပိတ်ထားခြင်းနှင့် 38 ဆဲလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်လယ်ကွင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတူ WT ကြွက်တွေမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေး7ရာအရပျဆဲလျ, 31 ဆဲလ်တွေ, remapping ပြသခဲ့သည်။ 26 ဆဲလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်ပိတ်ထားနှင့် 1 ဆဲလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်လယ်ကွင်းပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်အတူ D8R-KO ကြွက်တွေမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်3ဆဲလ်၏,5ဆဲလ်တွေ, remapped ခဲ့ကြသည်။ KO, 37 / 86, 44.2%, vs ကြွက်များ၏အုပ်စုနှစ်စုအကြားဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင် remapped ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကို (WT, 8 / 26, 30.8% မျှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည် p = 0.223), ပိုပြီးဆဲလ် KO, 31 / 86, 36.1%, vs,5/ 26, WT (19.2% WT ကြွက်တွေမှာသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်လယ်ကွင်းပြောင်းလဲသွားတယ်သော်လည်း p = 0.107) ။ ဤရလဒ်သည်တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့နှစ်ဦးစလုံး WT နှင့် D1R-KO ကြွက်တွေမှာဆဲလ်အရေအတွက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်း။ အကြံပြု အကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထုနှစ်ဦးစလုံးအခန်းရာအရပျဆဲလ်များ၏အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 10 sequential အစည်းအဝေးများကျော်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ သူတို့မကြာခဏရပ်တန့်ဖို့နှင့်ထိုထက်နည်းကျပန်း run ဖို့စတင်ခဲ့အဖြစ် D1R-KO ကြွက်များတွင်အများအပြားဆဲလ်များအတွက်, မှတ်တမ်းတင်နေစဉ်အတွင်းကြွက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည် (စက်ဝိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့, 4â€ "5 အစည်းအဝေးများအပြီးယိုယွင်းဆိုးရွားTran et al ။ , 2005), နှင့်၎င်းတို့၏ဘယ်နေရာတွေမှာရာအရပျလယ်ကွင်းခွဲခြားစိတ်ဖြာဘို့မလုံလောက်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းတင်နယ်ပယ်တွင်သာသေးငယ်တဲ့ဧရိယာ, ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အကျွမ်းတဝင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အာရုံခံကိုယ်စားပြု ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ D10R-KO ကြွက်တွေမှာဆဲလ်တစ်ကန့်သတ်အရေအတွက်ဝတ္ထုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ဆိုလိုတာကလုံလောက်သောအမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 1 အစည်းအဝေးများကျော်မှတျတမျးတငျထားသာဆဲလ်တွေထည့်သွင်း ပတ်ဝန်းကျင်။
WT ကြွက်များတွင်နေရာအရပ်ဆဲလ်များအတွက်သဘောထားကိုဦးစားတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌လယ်ကွင်း (နေရာချထားဖို့ distal တွေကိုသုံးစွဲဖို့သဖန်းသီး။ 5A, 6â€ "10) ကို Proximity တွေကို (ကျော်သဖန်းသီး။ 5B, 6â€ "10) (ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၌ သာ. သိသာခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 7E,G; စားပွဲတင် 2) ။ စိတ်ဝင်စားစရာအာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းယခင်က (အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် distal နှင့် Proximity နှစ်ဦးစလုံးတွေကိုတုန့်ပြန်ခဲ့သဖန်းသီး။ 5C, 1â€ "5); ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, သို့သော်, သူတို့ရဲ့တည်နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပစ်ခတ်ရန် (distal ပေမယ့် Proximity မဟုတ်တွေကိုမှကျောက်ချရပ်နားခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5C, 6â€ "10) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုန့်ပြန်သောအရပ်ဆဲလ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (အကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြားကွဲပြားဘူးစားပွဲတင် 2) ။ ဤရလဒ်သည် WT ကြွက်တွေမှာ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၎င်းတို့၏တည်နေရာကိုကိုယ်စားပြုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ distal တွေကိုထံမှအချက်အလက်များ၏ encoding က WT ကြွက်တွေမှာအကျွမ်းတဝင်နှင့်ဝတ္ထုနှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက် Proximity တွေကိုကျော်ကြီးစိုးခဲ့တဲ့အချက်ကိုဤအချက်အလက်သုံးပြီးအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်တိရစ္ဆာန်ဖွင့်အတွက်ထိရောက်သောကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးရပျကိုဆဲလ်အချို့ကိုသစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွင် distal တွေကိုနောက်တော်သို့လိုက်ထို့နောက် Proximity ဟာအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သတင်းအချက်အလက်, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်ညှိဖြစ်လာခဲ့သည်။ (ဤရလဒ် hippocampal အာရုံခံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော cue ရည်ညွှန်းစနစ်များရှိပါတယ်တဲ့လူသိများစိတ်ကူးနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, သောသူတို့သည်ပြင်သာပြောင်းသာလဲလှယ်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ထပ်Gothard et al ။ , 1996; Knierim et al ။ , 1998; Zinyuk et al ။ , 2000).
ပုံ7။
WT နှင့် D1R-KO ကြွက်တွေမှာ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်များအတွက်အစည်းအဝေးများ၏စွမ်းအကြားအကျယ်ချဲ့ဆက်စပ်မှုတန်ဖိုးများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းလည်ပတ်ထောင့်နှိုင်းယှဉ် Spatial ဆက်စပ်မှုတန်ဖိုးများ Scatterplots ။ လှည့်ထောင့်ဟာ abscissa အပေါ်ကိုယ်စားပြုနေကြပြီး, အစည်းအဝေးများ၏စွမ်းအကြား Spatial ဆက်စပ်မှုတန်ဖိုးများတရားတို့ကိုအပေါ်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်; အပြာရောင်စိန်ပွင့် WT ကြွက်အဘို့ဖြစ်ကြ၏ပြည့်စေပြီးမှ, D1R-KO ကြွက်နီပွင့်လင်းရင်ပြင်။ A-D ကို, အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်၌, အရပျလယ်ကွင်း (180Â°, distal လည်ပတ် session တစ်ခု vs စံ session တစ်ခုန်းကျင်ဖြန့်ဝေ) distal တွေကို (ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ရသော WT ကြွက်ရာဆဲလ်နှစ်ခု subpopulations ရှိခဲ့သည်A) နှင့် Proximity တွေကို (180Â°, Proximity လည်ပတ် session တစ်ခု vs အခြေခံ session တစ်ခု2န်းကျင်ဖြန့်ဝေ) (C), အ Proximity တွေကိုကျော် predominant အဆိုပါ distal တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ။ D1R-KO ကြွက်အဘို့, နေရာမရှိဆဲလ် distal တွေကို (အားလုံး0Â°န်းကျင်) (၏လည်ပတ်နေဖြင့်၎င်းတို့၏ရာအရပျလယ်ကွင်းပြောင်းရွှေ့A) နှင့်အများဆုံးဆဲလ်တွေ (အ Proximity တွေကိုလည်ပတ်နေဖြင့်၎င်းတို့၏ရာအရပျလယ်ကွင်းပြောင်းရွှေ့C). E-H ကိုယင်းဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်, အ distal တွေကိုမြင်သာထင်သာအကျိုးသက်ရောက်ခုနှစ်တွင် (E) Proximity တွေကိုကျော် (G) တုန်းပဲမြင် WT ကြွက်တွေမှာပိုပြီးသိသာခဲ့ပါတယ်။ D1R-KO ကြွက်များတွင်သာအနည်းငယ်ဆဲလ် distal တွေကို (များ၏လည်ပတ်တုံ့ပြန်E) နှင့် Proximity တွေကို (G), နှင့်အများအပြားဆဲလ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင် distal သို့မဟုတ် Proximity cue အပြောင်းအလဲများအတိုင်းလိုက်နာခြင်းမရှိပေ။
D1R-KO ကြွက်များတွင်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် distal တွေကို (ကလွှမ်းမိုးနေရာမရှိဆဲလ်တွေရှိခဲ့သဖန်းသီး။ 6A,B, 6-10; သဖန်းသီး။ 7E; စားပွဲတင် 2) ။ ဤရလဒ် (ကြောင့် D1R တစ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အချို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်Kentros et al ။ , 2004) ။ အရပျထဲကအများစုဟာဆဲလ်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Proximity တွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာ D1R-KO ကြွက်တွေမှာ, နေရာဆဲလ်၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်း, ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Proximity တွေကိုများ၏လည်ပတ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဒါဟာ (ထိုဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မ cue တုံ့ပြန်ရာအရပျဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းမှတ်သားလောက်ဖြစ်ပါသည်စားပွဲတင် 2) ။ ဤရလဒ်သည်ထိုအရပျအကြံပြုအဆိုပါ D1R-KO ကြွက်တွေမှာဆဲလ်တွေ distal တွေကိုများ၏ထိန်းသိမ်းရေးမှလျော့နည်းဖွယ်ရှိတုံ့ပြန်ပုံရသည်နှင့် Proximity တွေကိုပြုလုပ်လုံလောက်သော encoding က hippocampal လှုပ်ရှားမှုမှဤအချက်အလက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမဟုတ်တော့ထိတွေ့မှုမလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါလှာထဲမှာ dopamine receptors ၏တည်ရှိမှုသည်ယခင်က (အစီရင်ခံထားသည်Djamgoz et al ။ , 1997; ငုယင်-Legros et al ။ , 1999; CourtiÃ¨re et al ။ , 2003) ။ သူတို့ရှေ့မှာ D1R-KO ကြွက်များ၏တွေလိုပဲအမြင်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ထစေ၏။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် (ကြွက်များအတွက်တွေလိုပဲအမြင်စမ်းသပ်ဖျော်ဖြေFox က, 1965; Crawley, 2000) ။ ကွဲပြားခြားနားမှု (ကြွက်များ၏နှစ်မျိုးအကြားတုံ့ပြန်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများနှင့် latency ၏နံပါတ်များအတွက်မတွေ့စားပွဲတင် 3) (အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှု: WT, KO vs 90 / 100, 87 / 100, p = 0.51; အောင်းနေချိန်: WT, KO vs 170.1 တစ်± 12.8, 181.8 တစ်± 11.8 ့, p = 0.49), အ D1R-KO ကြွက်များတွင်အမြင်အာရုံအမြင် WT ကြွက်တွေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသိသိသာသာလစ်လပ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။
စားပွဲတင်3။
ယင်းအမြင်အာရုံ WT အတွက်ချောက်ထဲစမ်းသပ်မှုနှင့် D1R-KO ကြွက်များ၏ရလဒ်များ
D1R သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတုံ့ပြန်အတွက် hippocampus အတွက် Spatial ကိုယ်စားပြု modulates သောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူ D1R-KO နှင့် WT ကြွက်တွေမှာ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ D1R-KO ကြွက် WT ကြွက်၏တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးစံ session တစ်ခုအတွက်နဂိုအတိုင်းအခြေခံပစ်ခတ်ရန်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်အရေအတွက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အရင်က D1R-KO ကြွက်တွေအတွက်နျူကလိယ accumbens ရာ-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှု၏ပျမ်းမျှအရပ်ဌာနကိုလယ်အရွယ်အစားလျှော့ချ (NAc) (တွေ့ပြီTran et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့် HF နှင့် NAc အပြန်အလှန်ဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံး dopaminergic စနစ်များအားဖြင့်ဖန်တီးနေကြသော်လည်းဤနှစ်ခုအဆောက်အဦများအတွက် Spatial ကိုယ်စားပြုအပေါ် D1R မော်ဂျူ၏သက်ရောက်မှုထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ D1R စနစ်၏ Pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး (Gill နှင့် Mizumori, 2006) ကြွက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် hippocampal ရာအရပျဆဲလ်တစ်ခုသာ D ကိုပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ1 စကားစပ်အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုအတွက်စံ session တစ်ခုမှာတော့ D1R တစ်ဦးကိုပယ်ဖျက်ရှိခဲ့ပေမယ့်ဆက်စပ်ရလဒ် D1R-KO ကြွက်တွေမှာ HF အာရုံခံ၏အခြေခံပစ်ခတ်ရန်ဂုဏ်သတ္တိများကြွက်အတွက်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသောမပြောင်းလဲခဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတည်ငြိမ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြွက်ရာအရပျဆဲလ်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရတည်ငြိမ်သည့်များပြားလှသောကြိုတင်အတွေ့အကြုံ, ရှိခဲ့ပါတယ်, ဤနှုန်း se အရပျလယ်ကွင်း၏အရွယ်အစားထက် Spatial အညွှန်းပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုခြယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသို့သော်ကျနော်တို့ D1R-KO ကြွက်တွေမှာအခြေအနေတွင်-မှီခို plasticity အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပွောငျးလဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ hippocampal ကိုယ်စားပြုမှုရေရှည်အလားအလာ (LTP) (၏ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်Rotenberg et al ။ , 2000; Dragoi et al ။ , 2003), ဤ Synaptic plasticity dopamine အားဖြင့် modulated နိုင်ပါတယ် (Otmakhova နှင့် Lisman, 1996; Matthies et al ။ , 1997; Swanson-ပန်းခြံ et al ။ , 1999; လီ et al ။ , 2003) နှင့် Spatial အသစ်အဆန်း (လီ et al ။ , 2003) ။ နေရာအရပ်ဆဲလ်လျှင်မြန်စွာအလှည့်အတွက် idiothetic သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်ဟူသော, ပတ်ဝန်းကျင်၏အဆင်အပြင်ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်အဘို့အ Spatial တွေကိုအဆိုပါပြည့်စုံ encoding ကအရေးပါပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်စွမ်းရည်ကိုအထူးသဖြင့်ဝတ္ထု enviroments မှာ, Spatial သင်ယူမှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ D1R ၏မရှိခြင်းဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်တွင် Spatial တွေကိုပြောင်းလဲမှုများတုံ့ပြန်ရာအရပျဆဲလ်များ၏အရေအတွက်လျော့ကျမှု Spatial cue သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏ပေါင်းစည်းမှုဆီးတားလေ၏။ သို့သော်နေဆဲအခြားအချက်အလက်အားဖြင့်တည်ငြိမ်စေနိုင်သည် hippocampal ရာအရပျဆဲလ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကို၏ကိုယ်စားပြုမှုထိုကဲ့သို့သော idiothetic တွေကိုကဲ့သို့သောအခြားသတင်းရပ်ကွက်များ, (ထံမှဆင်းသက်လာစီးဆင်းGothard et al ။ , 1996; Whishaw et al ။ , 1997; Knierim et al ။ , 1998; Zinyuk et al ။ , 2000; Stuchlik et al ။ , 2001) (လမ်းကြောင်းကိုပေါင်းစည်းမှုအတွက်အသုံးပြုGothard et al ။ , 1996; Whishaw et al ။ , 1997; McNaughton et al ။ , 2006), ထိုကဲ့သို့သော glutamatergic စနစ်များ (ကဲ့သို့သောအခြား neurotransmitter စနစ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူMcHugh et al ။ , 1996; cho et al ။ , 1998; Kentros et al ။ , 1998; McHugh et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာအာရုံကြော plasticity ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမဟုတ်တော့ထိတွေ့မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ : D တစ်ခုမရှိခြင်းနှင့်အတူ1 မော်ဂျူ, D1R-KO ကြွက်၌ဤအာရုံကြော plasticity ဦးစားပတ်ဝန်းကျင်ကနေ distal တွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ idiothetic တွေကို (ဥပမာလမ်းကြောင်းကိုပေါင်းစပ်) မှချည်ထားသောနိုငျသညျ။ Hippocampal ရာအရပျဆဲလ် Self-တည်နေရာ (၏ပြောင်းလဲနေသောကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတခု et al ။ , 2008) နှင့်ယခု entorhinal cortex အတွက်ဇယားကွက်ဆဲလ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်သိနေကြသည် (Brun et al ။ , 2002; Hafting et al ။ , 2005; Sargolini et al ။ , 2006; Fyhn et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါဇယားကွက်ဆဲလ် (ကလမ်းကြောင်းပေါင်းစည်းမှု-based အာရုံကြောမြေပုံ၏ဒြပ်စင်ပေးစေခြင်းငှါMcNaughton et al ။ , 2006; တခု et al ။ , 2008) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် D1R မရှိဘဲဆဲလ်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်မှ Proximity တွေကိုအောက်ပါနေရာအရပ်ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းပေါင်းစည်းမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးက default "မြေပုံကို on" နောက်ကျောလှည့်။
hippocampal အာရုံခံ၏ Spatial အသစ်အဆန်း encoding ကများစွာသောအခြားစာရေးသူ '' remapping '(ခေါ်နှင့်အတူညီတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းLeutgeb et al ။ , 2005b) နှင့်တစ်ဦး D1R-မှီခိုနိုင်စွမ်းဖြစ်ထင်နေသည် (လီ et al ။ , 2003), (Synaptic-မှီခို plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါလီ et al ။ , 2003) D1R ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအ neuromodulatory စနစ်များ (ပေါ်မှာဤများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်မသာLevine et al ။ , 1996; Mele-et al ။ , 1996; Swanson-ပန်းခြံ et al ။ , 1999) ။ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများ Spatial သိမှတ်ခံစားမှုတစ်ခုအပြောင်းအလဲတချို့အတွက်ရရှိလာတဲ့, hippocampal အာရုံခံ၏ကိုယ်စားပြုမှုအလျှော့ပေးလိုက်လျော (Kentros et al ။ , 2004; Stuchlik နှင့်ခြိုငျ့, 2006) သို့မဟုတ် Spatial Spatial တွေကိုအသုံးပြုမှုလိုအပ်သင်ယူမှုနှင့်သောအရပ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာချို့ယွင်း (el-Ghundi et al ။ , 1999; Tran et al ။ , 2005) ။ ထိုမှတပါး, Kentros et al ။ (2004) ထို့အပြင်: D များ၏လျှောက်လွှာကိုတွေ့ရှိခဲ့1/D5 ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်တွေမှာအဲဒီ receptor agonists နှင့်ရန်နေရာအရပ်လယ်ပြင်တည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားသည်။ အတူတူ၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူ Gill နှင့် Mizumori (2006) နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာသူများဤဒေတာ hippocampal ကိုယ်စားပြုမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopaminergic neuromodulation ၏အခန်းကဏ္ဍကို ဆက်စပ်. အ။ တချို့ကသည်အခြားလေ့လာမှုများ (D1R-ကြိုးကိုင်ကြွက်များတွင် Spatial သင်ယူမှုအတွက်လျော့နည်းချို့ယွင်းပြခဲ့ကြWilkerson နှင့် Levin, 1999), နှင့်ထိုကဲ့သို့သော NMDA receptors ကဲ့သို့သောအခြား neuromodulatory စနစ်များထိန်းသိမ်းရေး Spatial တာဝန်များကိုနှင့်နေရာဆဲလ်၏မတည်ငြိမ်မှုများတွင်ချို့ယွင်းစေနိုင်ပါတယ် (McHugh et al ။ , 1996, 2007; cho et al ။ , 1998; Kentros et al ။ , 1998; Rotenberg et al ။ , 2000), တစ်ဦးမပြောင်းလဲပတ်ဝန်းကျင်တွင်နောက်ထပ် hippocampal လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထက်ပိုမိုရုံ D1R system ပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းအလိုငှါအကြံပြုခြင်း။ တစ်ဦးတွေလိုပဲအမြင်စမ်းသပ်မှုအတွက်တန်းတူအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများနှင့် latency ၏ရလဒ်များကိုပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ Spatial ကိုယ်စားပြုမှုမြားတှငျပွောငျးလဲသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထက်အမြင်အာရုံအမြင်အတွက်လိုငွေပြမှုကနေပျေါပေါကျနိုငျသောအကြံပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုရာအရပျဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Spatial အထင်ကရအဆောက်အနှင့် idiothetic တွေကိုထံမှအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုဟာ dopaminergic ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်နှင့် glutamatergic စနစ်များအပါအဝင်အခြား neuromodulatory စနစ်များ, (ပါဝင်စေခြင်းငှါအယူအဆကိုထောကျပံ့McHugh et al ။ , 1996, 2007; Mele-et al ။ , 1996; Kentros et al ။ , 1998) ကို hippocampus နှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များ (အကြားSawaguchi နှင့် Goldman-Rakic, 1991; Wilkerson နှင့် Levin, 1999; Durstewitz et al ။ , 2000; Tran et al ။ , 2005), dopamine အဖြစ် NMDA လက်ရှိ modulate နိုင်ပါတယ် (Mele-et al ။ , 1996; Durstewitz et al ။ , 2000) နှင့် hippocampal plasticity, ဤမော်ဂျူအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (Sawaguchi နှင့် Goldman-Rakic, 1991; Durstewitz et al ။ , 2000) ။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းကျနော်တို့ D1R, hippocampal ရာအရပျဆဲလ်၏ Spatial ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြင့် encoded Spatial အသစ်အဆန်းဖော်ထုတ်မယ်အတွက် Spatial သင်ယူမှုများအတွက်လိုအပ်ချက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အခြားအမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်အလုပ် (Gasbarri et al ။ , 1996; Matthies et al ။ , 1997; Otmakhova နှင့် Lisman, 1996; el-Ghundi et al ။ , 1999; Swanson-ပန်းခြံ et al ။ , 1999; Wilkerson နှင့် Levin, 1999; Tran et al ။ , 2002, 2005; လီ et al ။ , 2003; Kentros et al ။ , 2004; Gill နှင့် Mizumori, 2006; Stuchlik နှင့်ခြိုငျ့, 2006) ကိုမော်လီကျူး မှစ. , အာရုံခံခြင်းငှါ, အမူအကျင့်အဆင့်အထိ, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက် dopamine များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအခြေခံသည့်ယန္တရားများထုတ်ဖော်အတွက်သိသိသာသာကိုကူညီသင့်ပါတယ်။
ဇွန်လ 12, 2008 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူအောက်တိုဘာလ 10, 2008 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံအောက်တိုဘာလ 10, 2008 ။
ဤလုပ်ငန်းကို Evolution သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ဂျပန်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, နှင့်ကို Canon များအတွက်အဓိကသုတေသန, (AHT မှ Grant က 18700312) ကိုဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန, ယဉ်ကျေးမှု, အားကစား, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Grant က-In-Aid ကိုသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနများကထောက်ခံခဲ့သည် ဥရောပတိုက်တွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအဘို့ဤစာမူကိုအပေါ်တန်ဖိုးရှိသောမှတ်ချက်များဒေါက်တာဦး Edmund တီ Rolls (Oxford တက္ကသိုလ်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်, ဗြိတိန်) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ဒေါက်တာ Toshikuni Sasaoka (အခြေခံပညာဇီဝဗေဒအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု, Okazaki, ဂျပန်) ။
စာပေးစာယူ Taketoshi Ono, System ကိုစိတ်ခံစားမှုသိပ္ပံ, Toyama တက္ကသိုလ် Sugitani 2630, Toyama 930-0194, ဂျပန်မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2008-0270 / 6474 / 08-2813390 $ 11 / 15.00 များအတွက်မူပိုင်ခွင့်©0Society က
Molden S က,
(2002) ဆဲလ်တွေချထားပါနဲ့တိုက်ရိုက် entorhinal-hippocampal circuitry ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားအသိအမှတ်ပြုမှုထားပါ။ သိပ္ပံ 296: 2243-2246 ။
စိတ္တဇ / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား
tanila H ကို,
Eichenbaum H ကို
(1998) alphaCaMKIIT286A အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သော hippocampal Spatial ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် CREBalphaDelta- ကြွက်။ သိပ္ပံ 279: 867-869 ။
Hardouin J ကို,
Vidal က F,
Hasbroucq T က
ကြွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အနိမ့်ထိုး dopamine D2003 နှင့် D1 အဲဒီ receptor ရန်၏ (2) ရွေးချယ်ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ Pharmacol 14: 589-598 ။
(2000) ငါ့မောက်စ်ဘာမှားနေလဲ transgene နှင့်နောက်ကောက်ကြွက်များ၏အပြုအမူ phenotyping (Wiley, New York) ။
Djamgoz ကို MB,
Hirano J ကို,
တစ်သျှူးများ၏ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာပြည်နယ်များမှစပ်လျဉ်းလွှာ dopamine ၏ (1997) Neurobiology ။ Vision ၏ Res 37: 3509-3529 ။
Harris က KD,
hippocampal ကွန်ရက်များအတွင်း (2003) Place ကိုယ်စားပြုမှုရေရှည်အလားအလာများကပြုပြင်မွမ်းမံသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 39: 843-853 ။
prefrontal cortex ၏ကွန်ယက်မော်ဒယ်အတွက်နှောင့်နှေး-ကာလလှုပ်ရှားမှု (2000) Dopamine-mediated တည်ငြိမ်။ J ကို Neurophysiol 83: 1733-1750 ။
Eichenbaum H ကို,
Dudchenko P ကို,
Shapiro က M,
tanila H ကို
(1999) က hippocampus, မှတ်ဉာဏ်, ရပျရပျဆဲလ်: က Spatial မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ် memory space ကိုလဲ? အာရုံခံဆဲလျ 23: 209-226 ။
el-Ghundi M က,
Drago J ကို,
dopamine D1999 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ (1) Spatial သင်ယူမှုလိုငွေပြမှု။ EUR J ကို Pharmacol 383: 95-106 ။
Foster DJ သမား,
Wilson ကနေ MA
အဆိုပါနိုးပြည်နယ်အတွင်းမှာ hippocampal ရာအရပျဆဲလ်တွေအတွက်အမူအကျင့်ပာ၏ (2006) ကို Reverse ပြန်ကန်။ သဘာဝ 440: 680-683 ။
(1965) က mouse ကိုအတွက်အမြင်နက်ရှိုင်းအမြင်များ၏လေ့လာမှုများအတွက်အမြင်ချောက်ထဲစမ်းသပ်။ Animation ပြုမူနေ 13: 232-233 ။
(1997) stereotaxic သြဒီနိတ် (Academic, San Diego မှ) တွင်အဆိုပါ mouse ကိုဦးနှောက်။
Fyhn M က,
Hafting T က,
entorhinal cortex အတွက် (2007) Hippocampal remapping နှင့်ဇယားကွက်ရှိမယ်။ သဘာဝ 446: 190-194 ။
Innocenzi R ကို,
Pacitti ကို C,
ကြွက်များတွင် mesohippocampal dopaminergic စနစ်၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်သွေးဆောင် (1996) Spatial မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်း။ neuroscience 74: 1037-1044 ။
D2006 ၏ (1) context-မှီခိုမော်ဂျူ receptors: hippocampus နှင့် striatum အတွက် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ neuroscience 120: 377-392 ။
လမ်းကြောင်းပေါင်းစည်းမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအကြားအပြန်အလှန်: အာကာသများအတွက် hippocampal ensemble ကုဒ်အတွက်မတိုက်ဆိုင်ဆုံးမသော (1996) Dynamics ကို။ J ကို neuroscience 16: 8027-8040 ။
အဆိုပါ entorhinal cortex အတွက် Spatial မြေပုံ၏ (2005) Microstructure ။ သဘာဝ 436: 801-806 ။
Hetherington PA ဆိုပြီး,
(1997) Hippocampal ရာအရပျလယ်ကွင်းအကွာအဝေး-မှီခိုထုံးစံ၌တစ်ခုတည်းအမြင်အာရုံတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ ပြုမူနေ neuroscience 111: 20-34 ။
ကြွက်များတွင် (1994) dorsal အတွက်ယူနစ်၏ Spatial ပစ်ခတ်ရန်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် ventral hippocampus ။ J ကို neuroscience 14: 7347-7356 ။
Kentros ကို C,
Hawkins က RD,
NMDA အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်အသစ်သော hippocampal ရာအရပျဆဲလျမြေပုံ၏ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေး၏ (1998) ဖျက်သိမ်းမှု။ သိပ္ပံ 280: 2121-2126 ။
Streater S က,
(2004) အရပ်ဌာနကိုလယ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်နှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင့် Spatial အခြေအနေတွင်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်။ အာရုံခံဆဲလျ 42: 283-295 ။
နေရာအရပ်ဆဲလ်များနှင့်ဦးခေါင်းကိုဦးတည်ချက်ဆဲလ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် idiothetic တွေကိုနှင့်ပြင်ပအထင်ကရအဆောက်အအကြား (1998) ဆက်သွယ်မှုသည်။ J ကို Neurophysiol 80: 425-446 ။
Koera K သည်,
Nakamura K သည်,
Nakao K သည်,
Miyoshi J ကို,
Toyoshima K သည်,
Hatta T က,
Otani H ကို,
Katsuki M က
(1997) K-RAS mouse ကိုသန္ဓေသား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Oncogene 15: 1151-1159 ။
Leutgeb S က,
hippocampal အာရုံခံ ensembles အတွက် Spatial နှင့် Episode မှတ်ဥာဏ် (2005a) လွတ်လပ်သော codes တွေကို။ သိပ္ပံ 309: 619-923 ။
(2005b) မှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်တွေ, Spatial မြေပုံများနှင့်လူဦးရေကုဒ်ချထားပါ။ Curr Opin Neurobiol 15: 738-746 ။
သေတမ်းစာ T က,
Cacucci က F,
Burgess N ကို,
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂျီသြမေတြီ၏ hippocampal ရာအရပျ-ဆဲလ်ကိုယ်စားပြုမှုအတွက် (2002) Long-term plasticity ။ သဘာဝ 416: 90-94 ။
Levine က MS,
Cepeda ကို C,
Westphal H ကို
NMDA အဲဒီ receptor-mediated တုံ့ပြန်မှုအပေါ် dopamine ၏ (1996) Modulatory လုပ်ရပ်များ: D ထဲမှာလျှော့ချနေကြသည်1A-deficient Mutant ကြွက်။ J ကို neuroscience 16: 5870-5882 ။
Cullen က wk,
Anwyl R ကို,
Spatial အသစ်အဆန်းမှထိတွေ့မှုအားဖြင့် hippocampal CA2003 အတွက် LTP သော induction ၏ (1) Dopamine-မှီခိုပံ့ပိုးကူညီ။ နတ် neuroscience 6: 526-531 ။
Maguire EA ၏,
Frith CD ကို,
(1998) ရှိရာကိုသိရှိရှိလာပြီ: လူသားတစ်ဦးအညွှန်းကွန်ယက်ကို။ သိပ္ပံ 280: 921-924 ။
Matthies H ကို,
Schröeder H ကို,
Kraus J ကို,
Höllt V ကို,
Krug M က
(1997) Dopamine D1-လစ်လပ် Mutant ကြွက် hippocampal ရေရှည်အလားအလာများ၏နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်ဖော်ပြကြပါဘူး။ Neuroreport 8: 3533-3535 ။
Tonegawa က S,
CA1996-တိကျတဲ့ NMDAR1 နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာနေရာလွတ် (1) ချို့တဲ့ခြင်း hippocampal ကိုယ်စားပြုမှု။ အာရုံခံဆဲလျ 87: 1339-1349 ။
Balthasar N ကို,
Coppari R ကို,
Fanselow က MS,
Wilson ကနေ MA,
Tonegawa S က
(2007) Dentate gyrus NMDA receptors အဆိုပါ hippocampal ကွန်ယက်တွင်လျင်မြန်သောပုံစံခွဲခြာဖျန်ဖြေ။ သိပ္ပံ 317: 94-99 ။
(2006) Path ကိုပေါင်းစည်းမှုနှင့် '' သိမြင်မှုမြေပုံ '' ၏အာရုံကြောအခြေခံ နတ်ဗြာ neuroscience 7: 663-678 ။
Castellanos ကို C,
Cabib S က,
Caccia S က,
(1996) Dopamine-Nကြွက်တွေမှာ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏မော်ဂျူအတွက် -methyl-D-aspartate interaction က။ EUR J ကို Pharmacol 308: 1-12 ။
(2008) ဆဲလ်များ, ဇယားကွက်ဆဲလ်များနှင့် ဦး နှောက်ရဲ့ Spatial ကိုယ်စားပြုမှုစနစ်နေရာ။ Annu ဗြာ neuroscience 31: 69-89 ။
(1987) hippocampal ရှုပ်ထွေး-ဆူးဆဲလ်များ၏ Spatial ပစ်ခတ်ရန်အပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို neuroscience 7: 1951-1968 ။
ငုယင်-Legros J ကို,
Versaux-Botteri ကို C,
Vernier P ကို
အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေလှာထဲမှာ (1999) Dopamine အဲဒီ receptor localization ။ Mol Neurobiol 19: 181-204 ။
Burgess N ကို
hippocampal အာရုံခံရာအရပ်လယ် (1996) Geometry နှင့်ဆိုင်သောပြဌာန်းခွင့်။ သဘာဝ 381: 425-428 ။
Dostrovsky J ကို
(1971) တစ်ဦး Spatial မြေပုံအဖြစ် hippocampus ။ အဆိုပါလွတ်လပ်စွာ-ရွေ့လျားကြွက်များတွင်ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုကနေပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res 34: 171-175 ။
(1996): D1/D5 dopamine အဲဒီ receptor activation CA1 hippocampal synapses မှာအစောပိုင်းရေရှည်အလားအလာများ၏ပြင်းအားတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience 16: 7478-7486 ။
Ranck JB ဂျူနီယာ
ထိန်းအကွပ်မရှိသောကြွက်များတွင် dorsal hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် septum အတွက်တစ်ခုတည်းတွင် neuron အပေါ် (1973) လေ့လာရေး။ ဗြဲအပြုအမူဆက်စပ်မှုနှင့်ပစ်ခတ်ရန် repertoire ။ Exp Neurol 41: 461-531 ။
(2005) Emotion (Oxford တက္ကသိုလ် UP, နယူးယောက်) ကရှင်းပြသည်။
အဆိုပါမျောက် hippocampus အတွက် (2005) ဆုကြေး-Spatial အမြင်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်သင်ယူမှု။ J ကို neuroscience 25: 6167-6174 ။
ရေရှည်အလားအလာများ (2000) စင်ပြိုင်တည်ငြိမ်မှုရာအရပျဆဲလ်များနှင့်လျော့နည်းသွားပရိုတိန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သင်ယူခြင်းတစ်ဦးကလှုပ်ရှားမှု kinase ။ J ကို neuroscience 20: 8096-8102 ။
Sargolini က F,
(2006) အနေအထား, ဦးတည်ချက်နှင့် entorhinal cortex အတွက်အလျင်၏တွဲဖက်ကိုယ်စားပြုမှု။ သိပ္ပံ 312: 758-762 ။
Sawaguchi T က,
prefrontal cortex အတွက် (1991) D1 dopamine receptors: အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သိပ္ပံ 251: 947-950 ။
အာရုံကြောသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များအတွက်ကြိုတင် (1993), အ hippocampal ကုဒ်, eds Hanson SJ, Cowan JD, Giles CL (မော်ဂန် Kaufmann, San Mateo,, CA), Vol 5, စစ 1030-1037 အပြင်ရန်သတင်းအချက်အလက်သီအိုရီချဉ်းကပ်နည်း။
ခြိုငျ့ K သည်
တက်ကြွ allothetic ရာအရပ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းအပေါ် dopamine D2006 အဲဒီ receptor ရန် SCH1 နှင့် D23390 agonist A1 ၏ (77636) Effect တစ် Spatial သိမှတ်ခံစားမှုတာဝန်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 172: 250-255 ။
Fenton AA ကို,
Bures J ကို
ကြွက်၏ (2001) အလွှာ idiothetic အညွှန်း extramaze နှင့် intramaze တွေကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်တန်ဖိုးအားဖြင့်အာရုံချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 98: 3537-3542 ။
Mason ဆို-က Parker SE,
Dragunow M က,
Cohen ကို AS,
(1999) dopamine D1 / D5 အဲဒီ receptor နှင့်ရေရှည်အလားအလာများ၏ဇွဲမှ beta ကို-adrenergic အဲဒီ receptor ပံ့ပိုးမှုများကို၏ hippocampus အတွင်းတစ်ဦးကနှစ်ဆ dissociation ။ neuroscience 92: 485-497 ။
Tamura R ကို,
Uwano T က,
Kobayashi T က,
Katsuki M က,
Ono T က
(2002) dopamine D2 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာရာအရပျနဲ့ဆက်စပ်ဆုလာဘ်များခန့်မှန်းဖို့ accumbens အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 99: 8986-8991 ။
(2005) Dopamine D1 receptors locomotor လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရပျရပျနဲ့ဆက်စပ်ဆုလာဘ်များခန့်မှန်းဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 102: 2117-2122 ။
Maaswinkel H ကို
(1997) Hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်လမ်းကြောင်းကိုပေါင်းစည်းမှု။ Curr Opin Neurobiol 7: 228-234 ။
(1989) Spatial နှင့် hippocampal အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏အမူအကျင့် Correlate ။ J ကို neuroscience 9: 2737-2763 ။
(1999) Ventral hippocampal dopamine D1 နှင့် D2 စနစ်များနှင့်ကြွက်များတွင် Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်။ neuroscience 89: 743-749 ။
အာကာသများအတွက် hippocampal ensemble ကုဒ်၏ (1993) Dynamics ကို။ သိပ္ပံ 261: 1055-1058 ။
ယာမာဂူချီ H ကို,
Sakagami H ကို,
goto K သည်,
Kondo H ကို,
(1996) Dopamine D2 အဲဒီ receptor အဆိုပါ pituitary အတွက်ဆဲလ်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် proopiomelanocortin စကားရပ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မျိုးဗီဇဆဲလ် 1: 253-268 ။
Zinyuk L ကို,
Kubik S က,
Kaminsky Y ကို,
(2000) ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအမူအကျင့်ကို အသုံးပြု. hippocampal လှုပ်ရှားမှုနားလည်ခြင်း: ရာအရပျအညွှန်းတာဝန်-သက်ဆိုင်ရာများနှင့်တာဝန်-ဆီလျှော် Spatial ရည်ညွှန်း frames များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နေရာကလာပ်စည်းရိနာစွဲဖြစ်ပေါ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 97: 3771-3776 ။